Dawlad Dadkeeda Kula Talisay In ‘Coronavirus’ Ay Iskaga Daweeyaan Toonta, Malabka Iyo Basasha | Berberanews.com
Home Qubanaha Dawlad Dadkeeda Kula Talisay In ‘Coronavirus’ Ay Iskaga Daweeyaan Toonta, Malabka Iyo...
Dawlad Dadkeeda Kula Talisay In ‘Coronavirus’ Ay Iskaga Daweeyaan Toonta, Malabka Iyo Basasha
Dawladda Kuuriyada Woqooyi ayaa dadkeeda kula talisay si ay uga adkaadaan ‘Coronavirus’ in ay cunaan dawooyin dhaqameed dadka dalkaasi isticmaalaan, isla markaana ay ka dheeraadaan isticmaalka Al-kahoosha.
Sida uu ku warramayo wargeyska The Daily Express ee dalka Ingiriiska ka soo baxaa, Talooyinka ay dawladdu muwaadiniinta siisay si ay isaga daweeyaan ama uga hortagaan Fayraskan dhaliya xanuunka ‘COVID-19’ waxaa ka mid ah Toonta, Basasha iyo malabka.
Dhinaca kalana waxa ay muwaadiniinteeda uga digtay in ay cunaan dawooyinka caadiga ah iyaga oo aan dhakhtar la tashan, waxa aanay kula talisay in ay iska ilaaliyaan isticmaalka cabbitaannada khamriga iyo guud ahaan Al-kahoosha noocyadeeda. Waxaa la ogyahay in khamriga iyo maandooriyeyaasha la midka ahi ay daciifiyaan habdhiska difaaca jidhka aadamaha, taas oo khatar gelinaysa nolosha qofka haddii uu ku dhaco xanuunka ‘COVID-19’. Waxa kale oo muwaadiniinta dalkaas looga digay in ay xanuunkan u isticmaalaan dawooyinka Anti-baayootigga ah, oo la ogyahay in aanay waxba ka tarin Fayrasyada.
Dalka Kuuriyada Woqooyi oo ku guulaystay in xuduudkiisa Shiinaha degdeg u xidho markii ugu horreysay ee uu soo baxay warka Koroona-Fayras, waxa uu sheegay in aanay jirin cid muwaadiniintiisa ah oo illaa hadda xanuunkaas laga helay. Laakiin arrintan waxaa aad uga shakisan warbaahinta iyo xeeldheereyaasha reer galbeedka, oo ku doodaya in dawladda Kuuriya ay qarinayso dad uu ku dhacay xanuunkani, ama ay is diidsiinayso. Haddii ay taas dambe tahayna ay keenayso khatar ah in xanuunku mar keliya dadka meel khatar ah gaadhsiiyo.
Toonta iyo basashu waxa ay ka mid yihiin dawo dhaqameedka dhaqannada kala duwan ee adduunku wada yaqaannaan, muddo qarniyo ahna laga soo isticmaalayey, waxaan lagu yaqaannaa awood ay ku dilaan bakteeriyada, isla markaana ku dabiibaan xanuunno badan, waxaa isaguna la mid ah malabka oo ay diinta islaamka iyo dhaqanno badan oo horeba isku raaceen in uu dawo muhiim ah u yahay bakteeriyada iyo xanuunno kale oo badan. Laakiin illaa hadda dhakhaatiirtu si cad uma ay sheegin in dawooyinkani ay wax ka tari karaan xanuunka Coronavirus, taas oo u baahan shaybaadh rasmi ah oo lagu ogaado.
Previous article“iskumaanu ogayn inay Xuduudka Somaliland ka tallaabaan.”Suldaan Cumar
Next articleSomalia: Tirada dadka u dhintay Corona Virus oo 5 qof gaadhay iyo dadku asiibay oo boqol ku dhaw